Fitsidihana toerana misy vakoka manerantany any Espana | Vaovao momba ny dia
Fitsidihana toerana misy vakoka manerantany ao Espana
Carmen Guillen | | Tanànan'ny Espana, Cordova, Fialan-tsasatra, Granada, Sevilla
Izaho dia iray amin'ireo izay aleoko mandeha amin'ny toerana espaniola sasany alohan'ny hahafantarako ireo toerana hafa any ivelany, izay manana ny hatsarany koa, tsy maintsy lazaina daholo ny zava-drehetra. Tsotra ny antony: any Espana isika dia afaka mivezivezy avy any avaratra mankany atsimo na avy any atsinanana ka hatrany andrefana, mahita ireo hatsaran-tarehy tsy mampino mendrika ny anaram-boninahitra efa ananan'izy ireo: Lova manerantany. Izany no lazain'ny lahatsoratray anio, ny tolo-kevitra momba ny fitsangatsanganana, an-tanan-dehibe na ambanivohitra, hikarohana ireo tranokala manerantany.
Androany, ao amin'ny Actualidad Viajes, dia tsy manolotra afa-tsy 5 amin'izy ireo izahay, saingy misy maro hafa ... Miaraka aminay hijery azy ireo ve ianao, na dia mandritra ny fotoana fohy aza?
1 The Alhambra, any Granada
3 Lakandranon'i Segovia
4 Seville sy ny harena ao aminy
The Alhambra, any Granada
Vao tsy ela akory izay dia voafidy ho tanàna tsara indrindra eto Espana i Granada. Mieritreritra aho fa tadidiko fa nifaninana farany tamin'ny hatsaran-tarehy Andalosiana iray hafa, Córdoba. Nandeha tany amin'ny tanàna roa aho ary tiako ny roa, saingy eny, i Granada dia mikapoka azy (araka ny tsapako manokana).
Eny, ao Granada no ahitantsika ny iray amin'ireo trano be mpitsidika indrindra ao Andalusia sy Espana, amin'ny ankapobeny: Ny Alhambra. Na hita avy amin'ny Ny fijerin'i Saint Nicholas, na tena manitsaka ny tany, dia tranobe izay hajanonao amin'ny gaga izy.
Izy io dia natsangana avy amin'ny Taonjato faha-XNUMX, rehefa tamin'ny 889 Sawwar ben hamdun Tsy maintsy nialokaloka tao amin'ny Alcazaba izy ary nanamboatra azy io noho ny tolom-bahoaka nisy tamin'io fotoana io tao amin'ny Caliphate of Cordoba, izay an'i Granada.
Raha tsy afaka mitsidika azy ianao na inona na inona antony, aza manahy, amin'ity pejy, afaka manao fitsidihana virtoaly ianao ary hianatra ny tantara lalindalina amin'ity trano emblematika ity.
Nolazainay izany teo aloha rehefa nitady izay hahaliana anay indrindra ny The Alhambra, ary izany dia ity tanàna manan-tantara ity tsy azo avela tsy ho ao anaty lisitra intsony androany. Ny ivon-tantara manan-tantara dia narovan'ny UNESCO taona lasa izay ary io dia amin'ny alàlan'ny fanitsahana ny tetezana romana azy fotsiny, izay mahafinaritra Mosque ary latsaka amin'ny iray amin'ireo teahouses ao amin'ny faritry ny tanànan'i Cordoba jiosy, tsapanay fa mendrika ny fanendrena azy ho World Heritage Site.
Ho fanampin'ireo tranonkala efa voalaza hatrizay, raha mandeha any Córdoba ianao dia saika ilaina ny mitsidika ny Synagoga, ny San Basilio manodidina na ny Alcázar de los Reyes Cristianos.
Mbola tsy nahita aho fa tena iriko ity lakandrano ity. Ity fananganana mahavariana ity dia asan'ny Romana, toy ny ankamaroan'ny zavatra arahinay any Espana ary ny zavatra manaitra ny saina indrindra raha vao mahita azy ianao, raha ny filazan'ny namana izay nitsidika azy dia ny halavany. Ao amin'ireo sary aseho azy matetika, ny habeny dia tsy tena ankasitrahana, ary ny lakandrano dia tsy manana zavatra hafa ary tsy misy hafa noho ny 15 km ny halavany.
Hita io voatahiry tsara ary io no sary famantarana ny fisolo tena an'i Segovia, tsy misy isalasalana. Ny zava-misy izay nahasarika ny sain'ny maro ary nianarako vao tsy ela izay dia ny hoe eo anelanelan'ny vato sy ny vato dia tsy misy karazana putty na fotaka mampitambatra azy ireo, fa napetraka miaraka amin'ny rafitry ny tsindry sy ny lanjany izay nahavita taonjato maro lasa izay isika tohizo ny fitehirizana azy. Ireo romana adala ireo!
Seville sy ny harena ao aminy
Tsy dia lavitra any aoriana i Seville amin'ny filaharana ny harena Andalosiana tsara indrindra ary eto dia ao amin'ny lisitray manokana. Ao anatin'izany no ahitantsika ireo tranobe miseho ho toy ny fitsidihana toy ny tsara tarehy Giralda, ny Katedraly, ny Alcazar o ny Archive of the Indies.
Ny Archive of Indies dia fananganana ho an'ny mpivarotra sy ny mpivarotra namakivaky ny tanàna ary mitazona rakitra sy antontan-taratasy momba ny kaontinanta vaovao ankehitriny.
Ny Alcázar dia fananganana Silamo hijerena ny reniranon'i Guadalquivir. Ireo tranobe voalaza roa hatreto dia mifamatotra akaiky amin'ny renirano noho ny anjara asany mifandraika amin'izany.
Momba an'i Salamanca no resahina ary miresaka momba ny taloha sy ny oniversitenany. Izany dia navoakan'ny fanarahana ny maodelin'ny University of Bologna, ary namboly ny voan'ny fahalalàny tao amin'ny tranobe Gothic, Renaissance ary Baroque, izay miaraka amin'ny Ben'ny tanàna sy ny Katedraly (Old sy New), dia ao anatin'ny tanàna taloha arovan'ny UNESCO. Toerana tokana hitsidihana amin'ity vanim-potoana ity: fararano-ririnina.
Manantena izahay fa ireo tranokalan'ny Lova Iraisam-pirenena 5 dia nanaiky ny fahaizany ary tsy ho ela dia hitsidika anao ny olona. Araka ny efa nolazaiko dia miandry an'i Segovia aho. Tsy ho ela tsy ho ela…
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Fitsidihana toerana misy vakoka manerantany ao Espana
Tanàna eropeana 8 hitsidika azy amin'ny ririnina
Inona no ho hita any Shiraz, Iran